ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ: ကြက်ဥနဲ့ အကြော်
ယောက်ကျားက ယောက်ကျားပီပီ ပြတ်ပြတ်သားသား ရဲရဲ ရင့်ရင့်ပြောစမ်းပါ ဘာပတ်ချွဲ နပ်ချွဲ
အေး..မင်းမှတ်ထား ငါဘယ်တော့မှ မဟုတ်တာမလုပ်ဘူး မမှန်တာမပြောဘူး ငါ့ထမင်းကို ငါရိုး
ရိုးသားသားရှာစားတယ် ဘယ်သူ့ဆီကမှ လက်ဖြန့်တောင်းမစားဘူး..
ဟေ့ကောင်..လူကြီးက မင်းတို့ ဘ၀မှာ အဲ့ ၀ထ္ထုဆန်ဆန်ပြောရရင် မင်းတို့ဘ၀ခရီးရှည်ကြီးကို လျှောက်တဲ့နေရာမှာ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ရစေချင်လို့ပြောတာကွ ငါ့ကို မငေါ့နဲ့
ငါ့ကိုကြည့် ငါအကြော်ကျော်တယ် ငါ့ဖောက်သည်တွေ ငါကိုယ်တိုင်ပို့တယ် ငါ့အကြော်ကို သူ
များ အကြော်တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် မကြီးတောင်မှ မငယ်စေရဘူး အမြတ်အများကြီး ငါ့အတွက်
မကျန်ပေမဲ့ ငါ့အလုပ်ကို ငါဂုဏ်ယူတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဦးလေး ဦးလေးအလုပ်ကို ကျနော်လဲ သဘောကျဂုဏ်ယူပါတယ်
ဒီလိုပါ ကျနော်က မုန်ဟင်းခါးစားရင် အကြော်မပါပဲ စားရရင် အရသာ မတွေ့ပါဘူး အကြော်ပါမှ အကြော်ကျွတ်ကျွတ်လေးရယ် မုန်ဟင်းခါးရည်လေးရယ် မျှောချပြီးစားရတာ ကို သဘောကျ တော့ ဦးလေးတို့လို အကြော်ကျော်မဲ့သူတွေ မရှိရင် ကျနော်အတွက် အခက်ပါ ဒါ
ကြောင့် ဦးလေးအလုပ်ကို ကျနော်လဲ သဘောကျပါတယ် ဦးလေးရဲ့ ရိုးရိုးသားသား အကြော်ကို စားရလို့လဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်
အေး..ချစ်ဖေ..မင်းကတော့ စကားပြောရင် ရိတိတိ ငေါ့တော့တော့နဲ့
ဗျာ မဟုတ်ပါဘူး ဦးလေး ကျနော်မငေါ့ပါဘူး တကယ်ပြောတာပါ
အေး..ဘာဖြစ်ဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား ပြော ရိုးရိုးသားသားလုပ် ကွ
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ကျနော် ရိုးမြေကျ ဦးလေးစကားကို မှတ်သားထားပါ့မယ်.
ဦးလေး ..ကျနော့် အရိုးမြေကျပြီးတော့ ထိမှတ်ထားမယ်လေ. နောက်ပိုင်းတော့ ကျနော်လဲ မ
မင်းကတော့ လုပ်ပြန်ပြီ..အေးအေး..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညနေကျောင်းဆင်းရင် ငါတို့ ခြင်းဝိုင်းကိုလာ
ခဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား တာ ထမင်းစားကောင်း အိပ်ပျော်တယ်ကွ.
ဟုတ်ကဲ့ဦးလေး ကျနော်မှတ်စုထဲမှာ မှတ်ထားလိုက်ပါ့မယ်
ဟေ.တင်စိုး တို့ ရပ်ကွက်ထဲက ဦးလေး ဦးထွန်းရင်ကွာ ငါ့ကို ဆုံးမနေတာ သူက ရပ်
ကွက်ထဲမှာ ဘယ်သူနဲ့မှ အဆင်မပြေဘူးကွ သူက သူ့စိတ်ထဲမှာ တွေ့တဲ့အတိုင်းပြော
တော့ လူတွေက သူ့ကို လန့်ကြတယ် သူကတော့ အဲ့ဒီလိုပြောတတ်တာကိုပဲ ယောက်ကျား
ကောင်း လို့ ထင်နေတာကွ ဂုဏ်ယူနေတာ အဲ့ဒါ ငါ့ကို ဆုံးမနေတာ သူ့ယောက်ကျားကောင်း
ကြီးကလဲ မလွယ်ပါဘူးကွာ အရိုက်ခံရကိန်း ဟိုတနေ့က တို့ ရပ်ကွက်ထဲက ယောက်ကျားစိတ်
ပေါက်နေတဲ့ ကောင်မလေးမိညိုကို ပြောနေတာ မိညိုနဲ့ ရန်ဖြစ်ရောကွာ ရိုက်မယ်ပုတ်မယ်
ဦးလေးဦးထွန်းရင်က မိညိုကို နင်က မိန်းကလေးပဲ မိန်းကလေးလို မနေပဲ ယောက်ကျားလေး
လို ဘာနေစရာလဲတဲ့ နင်ယောက်ကျားလေးလိုနေတော့ကော ရုပ်ရှင်ရုံမှာ အပေါ့သွားရင် မိန်းကလေး အိမ်သာဖက်ကိုပဲ သွားရတာပဲမဟုတ်လားတဲ့ နင် စစ်ထဲဝင်ချင်ရင်ကော စစ်ထဲက
လက်ခံမလားတဲ့ (အဲ့ဒီတုန်းက..ပြောတာနော) အဲ့ဒါနဲ့ မိညိုနဲ့ ရန်ဖြစ်တာ လူကြီးက လူကြီးနေရာ မနေဘူး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နေတာ ဘာဖြစ်လဲ ဘာညာနဲ့ စကားကို များကြတာ
အေးလေကွာ မှန်တိုင်း ပြတ်ပြတ်သားသားပြောတိုင်း တဖက်သားနဲ့ ရန်ဖြစ်ရရင် ဘယ်ကောင်း
ဟုတ်ဘူးကွ..ဦးလေးဦးထွန်းရင်က အဲ့ဒီလိုပြောလို့ ဘယ်သူနဲ့ ရန်ဖြစ်ရတာ ဘယ်သူက စိတ်ဆိုးသွားတာဆိုပြီး မှတ်ထားပြီး နောက်လူတွေကိုပါ ထပ်ပြောပြနေသေးတာ အဲ့ဒါ ငါ့ကိုလဲ
သူ့လိုမျိုး အမှန်တွေ့ရင် အမှန်အတိုင်းပြော ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်နဲ့ လူချို စိတ်ကောက် လူ
ဖြောင့် စိတ်တို တဲ့ သူနဲ့ တွေ့ရင် သတိထားနေရတယ်.ချိုချိုသာသာပြောတတ်ရင် စိတ်ပုတ် စိတ်ကောက် တတ်တဲ့သူ ဖြောင့်ဖြောင့်ပြောတတ်တဲ့သူက စိတ်တိုသလိုလိုရှိပေမဲ့ တကယ်တော့ ကောင်းတယ်ဆိုပဲကွ..
ဒေါ်ဒေါ်တို့ မကြားလိုက်လို့ကွယ်. ဘယ်အချိန်ထဲက အော်ခေါ်နေတာလဲ
အော်..ဒေါ်ဒေါ် မကြာသေးပါဘူးခင်ဗျာ ခုပဲ တခွန်းနှစ်ခွန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်..
မေမေက ဒေါ်လေးသိန်းဆီမှာ ကြက်ဥ ၀ယ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါ
ခု..အိမ်ကနေတန်းလာတာလား မြို့ထဲကအပြန်လှည့်ဝင်လာတာလား အမောပြေ အအေးလေး
ဒေါ်ဒေါ် ကျနော်အိမ်ကနေလာတာပါ မသောက်တော့ပါဘူး
အေးအေး ဒါဆို ဒေါ်ဒေါ်တို့ လယ်ထဲမှာ စိုက်တဲ့ မြေပဲလှော်လေး စားရင်း
ဒေါ်လေး တလုံး အပိုထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်
ကြက်ဥက ဖေါက်သယ်သွားသွင်းမဲ့ အထဲက အကြီးဆုံးတွေ ရွေးပေးလိုက်တယ်နော်
ဦးရာလူ စနစ်ပေါ့ကွယ် သားလေးက အရင်လာဝယ်တော့လဲ သားလေးကို အရင်ပေးရတာ
ပေါ့ နော် တလုံးအပိုပေးတာကတော့ ဖေါက်သည်ဈေးနဲ့ မကွာအောင်ကွဲ့ သားတို့ ဆွမ်းလောင်းတော့လဲ ဒေါ်လေးနဲ့ အတူ ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ကွယ်.
ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်လေး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အေးအေး သားလေး လမ်းမှာ စက်ဘီးတွေ ကားတွေ ကြည့်သွားနော်
ကလေးမေမေကိုလဲ သတိရနေပါတယ် နေကောင်းလားလို့ မေးတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါနော်
ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်လေး ပြောလိုက်ပါ့မယ်..
ဟာ..ဆန်နီ ဘယ်ကပြန်လာလဲ ငါကြက်ဥလာဝယ်တာကွာ
အေး အဲ့ဒီအဒေါ်ကြီးက အရမ်းကို ယဉ်ကျေးတာကွာ ငါသူ့အိမ်မှာ ဈေးသွားမ၀ယ်ချင်ဘူး အမေက လွှတ်လို့သာလာရတာ သူ့အိမ်ရောက်ရင် ငါမနေတတ်ဘူးကွာ တအားယဉ်ကျေး
ပြီးဖေါ်ရွေတော့ အားနာသလိုလို ဘာလိုလို ငါအမေ့ကို ပြန်ပြောတိုင်း
အမေကတော့ ရီ(ရယ်)နေတာပဲကွ ငါလဲ အမေ့ကြောက်လို့သာ လာရတာ ဒီအဒေါ်ကြီးဆီ
လာဈေးဝယ်တိုင်း ဘာအားနာနေမှန်းမသိပါဘူးကွာ အဲ ဘယ်လိုနေရမလဲ မသိပါဘူးကွာ
သူက တမင်တကာ ယဉ်ကျေးပြနေတာတော့လဲ မဟုတ်ဘူးကွ အားလုံးကို သူက အဲ့ဒီလိုပဲ
အေး..ချစ်ဖေ ငါလဲ အဲ့ဒီလိုပဲ အဲ့ဒီဒေါ်လေးသိန်းဆီမှာ ဈေးသွားမ၀ယ်ချင်ဘူးကွ
ဦးလေး ဦးထွန်းရင်ကြီးစကားနဲ့ဆို ဒေါ်လေးသိန်းက စိတ်ကောက်စိတ်ပုပ် တဲ့သဘောပေါ့ကွာ
ငါတော့ အဲ့ဒီလိုမထင်ဘူးကွ သူဘာသာ နဂိုအတိုင်းပြောတာပဲ ထင်တယ်
အေး..ချစ်ဖေ ငါ့ကိုတော့ ဦးလေး ဦးထွန်းရင်က ပြောဘူးတယ် ဒေါ်လေးသိန်းက နှုတ်ကသာ
ချိုတာပါတဲ့ ရွှေပေါင်တိုးကျတော့ မလျှော့ဘူးဆိုပဲ
ငါထင်တာတော့ ဒေါ်လေးသိန်းက အလှုအတန်းဆိုလဲ လက်မနှေးပါဘူး ရပ်ရေး ရွာရေးဆိုလဲ
မသိတော့ပါဘူးကွာ.ဒေါ်လေးသိန်းကို ငါစသိထဲက ဒီပုံစံပဲ ဦးလေး ဦးထွန်းရင်လဲ ဒီပုံစံပဲကွ
မေမေပြောတာတော့ ဒေါ်လေးသိန်းက သူတို့ ငယ်ငယ်ထဲက ဒီလိုပဲတဲ့ မေမေကတော့ မမသိန်း လို့ ခေါ်တယ်ကွ.
ဦးလေးဦးထွန်းရင်ကတော့ လူဖြောင့် စိတ်တိုပါတဲ့။
ကိုချစ်ဖေတို့လဲ အသက်တွေကြီးလာ ဦးလေးဦးထွန်းရင်လဲဆုံး ဒေါ်လေးသိန်းလဲ ဆုံးသွားပါပြီ
ဒေါ်လေးသိန်းဆုံးတော့ အသက် ငါးဆယ်မပြည့်သေး ဦးလေးဦးထွန်းရင်ကတော့ အသက်ကြီး
တဲ့အထိကျမ်းမာရေး ကောင်းမှကောင်း ဖျားခြင်းနာခြင်းမရှိ အပေါ်အင်္ကျီလဲ တခါမှမကပ် ဖြစ်မဲ့
ဖြစ်တော့ တခါပဲ ဖျားပါတယ် တခါထဲ ဆုံးရှာပါတယ် ဒေါ်လေးသိန်းကတော့ တရှောင်ရှောင်
ကိုချစ်ဖေလဲ တခါဘူးမျှ မတွေးမိခဲ့ပါဘူး အသက်လေးရလာတော့ ကိုယ့်ဘ၀မှာ မိတ်ဆွေတု
တွေ မိတ်ဆွေစစ်ချင်ယောင်ဆောင်သူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးတွေနဲ့ နေရတော့မှ ကိုယ့်ကြုံခဲရ
တဲ့ ကိုယ့်အပေါ် ချစ်ခင်သူတွေ သနားဂရုနာသက် ဆုံးမသူတွေ ကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံသူ
တွေကို ပိုပိုသတိရလာတာမျိုးလား မသိပါဘူး။ မသိရင်လဲ မဖြစ်တော့ပါဘူး ရွှေရတုမွေးနေ့
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 2:41 PM
Crystal, February 4, 2011 at 6:32 PM
ကိုချစ်ဖေကြီးရဲ့ ရောက်လာမယ့်မွေးနေ့မှာ ဘဝလက်တွဲဖော်လေးနဲ့ပါ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း, February 4, 2011 at 7:02 PM
pandora, February 5, 2011 at 6:22 AM
ရွှေရတုရောက်တော့မယ့် ကိုချစ်ဖေ လှပတဲ့ရွှေရောင်နေ့စွဲတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
ကိုပိန်, February 5, 2011 at 11:35 PM
ဒီလိုပါပဲ ကိုချစ်ဖေရေ၊ အားလုံးကို ချုပ်နိုင်ဖို့ လည်ခဲ့တဲ့သံသရာက မလိုလောက်သေး လို့ဖြစ်မယ်။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဆက်လှိမ့်ကြတာပေါ့။
ကလူသစ်, February 6, 2011 at 12:35 AM
ရွှေရတုနီးပြီဆိုတော့ ဟိုအဖိုးကြီး (မှတ်တမ်းဆိုလား သူ့နာမည်က) နဲ့ နီးတာကိုပြောတာလား။ အသက်က လိုတိုပိုလျော့လုပ်ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောပါ။ စိန်ရတုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။